Rastra Daily | मानवीय सेवामा खटिने नर्समाथि निजी अस्पतालको अमानवीय अत्याचार : पढाइमा १० लाख खर्च, पारिश्रमिक १० हजार (भिडियो रिपोर्टसहित)
भिडियो : विनोद विष्ट, तस्बिर : दीपेन्द्र ढुंगाना
महामारीबीच अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने नर्सहरूमाथि निजी अस्पतालले चर्को श्रम शोषण गरेका छन् । सरकारी अस्पतालमा सरकार आफैँले घोषणा गरेको प्रोत्साहन भत्ता दिएको छैन । निजी अस्पतालमा पनि न्यूनतम सुविधासमेत नदिएर १२ घन्टासम्म काममा लगाउने गरिएको छ ।
सामान्य अवस्थामा आठ घन्टासम्म ड्युटीमा खटिने नर्स महामारीको यो वेला १२ घन्टा खटिएका छन् । तर, रातदिन नभनी अतिरिक्त सेवामा खटिएका नर्सका लागि निजी अस्पतालमा कुनै सुविधा छैन । यसै पनि श्रम शोषणमा परेका नर्सहरूमाथि अहिले महामारीका वेला थप अन्याय भएको छ ।
वीरगन्जका ओम अस्पताल र सीता अस्पतालमा दोहोर सेवा गर्छिन् सरिता परियार । बिरामीको सेवा गर्दागर्दै उनी पनि कोभिड संक्रमित भइन् । २३ साउनमा उनलाई संक्रमण पुष्टि भयो । संक्रमणमुक्त भएर अहिले उनी आफ्नो नियमित काममा फर्किएकी छिन्, तर उनी खुसी हुन सकेकी छैनन् । किनकि उनलाई संक्रमित भएर आइसोलेसन बसेको समयको तलब कटौती हुँदै छ । ‘यस्तो महामारीका वेला खटिएको भनेर भत्ता आउँछ भनेर सरकारले प्रचार गरेको छ, यता उपचार गर्दा आफैँ संक्रमित भएर आइसोलेसनमा बस्दाको समेत तलब काटिने अवस्था छ,’ उनले गुनासो पोखिन्, ‘घन्टाको हिसाबले तलब दिन्छन् । ड्युटी ग¥यो भने पाइन्छ, नभए पाइँदैन । पढाइमा यति धेरै लगानी भयो, उनीहरूले जे भन्छन्, त्यही मानेर काम गर्नुको विकल्प छैन ।’
आयुष्मा अधिकारी राष्ट्रिय मिर्गौला केन्द्रमा काम गर्छिन् । बिरामीको सेवाका खटिने यहाँका नर्सलाई पिपिई र मास्कसमेत दिइएको छैन । ‘लामो ड्युटीमा खाना, खाजा त आफ्नै पैसाले खानुपर्छ । त्यति मात्र होइन, अहिलेसम्म हामीलाई मास्क, पन्जा, पिपिई दिइएको छैन,’ अधिकारी भन्छिन् ।
त्यसै पनि श्रम शोषणमा रहेका नर्स महामारीका वेला झन् अस्पतालले जागिरबाट समेत निकाल्न थालेपछि आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । गत २६ भदौदेखि आन्दोलन थालेका उनीहरूले ६५बुँदे माग अघि सारेका छन् ।
आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता ज्योति रानाभाटले माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताइन् । ‘नर्सहरूमाथि ठूलो श्रम शोषण भइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘महामारीबीच न तलब दिइएको छ न बिदा । अझ नर्सहरूलाई दबाब दिएर सेवाबाट हटाइएको छ । यस्तो अत्याचारको अन्त्य हुनुपर्छ ।’ सरकारले चासो नदेखाए देशभरका नर्स सडकमै आएर आन्दोलन गर्ने चेतावनी उनले दिइन् । नर्सिङ संघले आफ्ना मागलाई हलुका रूपमा लिएको उनीहरूको गुनासो छ ।
पहिले भोलेन्टियर राखिन्थ्यो, अहिले ६ हजारमा पनि काममा लगाइएको छ : प्रा. मनकुमारी राई, अध्यक्ष, नेपाल नर्सिङ संघ
नर्सिङ पढ्न कति लगानी लाग्छ ?
शुल्क बेहिसाब छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पढाउँदा स्टाफ नर्सको खर्च करिब तीन लाखमा सकिन्थ्यो । पछिल्लो समय सिटिइभिटीले सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा पनि तीनदेखि चार लाखमा पढाउने हो । तर, हाल कागजमा तीन लाख देखाउने, तर टेबुलमुनिबाट थप चारदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म लिने गरेका गुनासा छन् । त्यस्तै बिएन, बिएस्सीको अध्ययनका लागि सरकारीभन्दा निजीले दोब्बरभन्दा बढी रकम लिन्छन् । जस्तो कि सरकारी कोटामा बिएन नर्सिङ पढ्न तीन लाखमा सकिन्छ । तर, त्यही अध्ययन गर्न निजीमा ६ लाख तिर्नुपर्छ । त्यस्तै बिएस्सी नर्सिङका लागि सरकारीमा शुल्क ६ लाख हाराहारी छ, निजीमा १० लाखको वरिपरि रहेको छ । त्यस्तै मास्टर्स अफ नर्सिङ (एमएन) गर्न गत वर्ष त्रिविमा तीन लाख रुपैयाँ थियो । तर, निजीमा १६ लाख रुपैयाँसम्म लिएका छन् । यसरी कानुनी रूपमा एउटा नीति बनाउने, तर विद्यार्थी र अभिभावकलाई आर्थिक रूपमा शोषण गर्ने क्रम जारी छ । अभ्यासका लागि आफ्नै अस्पताल नहुने नर्सिङ कलेजहरूले पनि अस्पताल भएकाहरूसरह शुल्क लिएका छन् । उनीहरूले अस्पतालबाहेक अन्य विभिन्न शीर्षक खडा गरेर अतिरिक्त शुल्क असुल्दै आएका छन् ।
यति चर्को शुल्क तिरेर नर्सिङ पढेपछि काम सुरु गर्दा पनि पारिश्रमिक भने निकै कम छ भन्ने गुनासो छ । कति अस्पतालले स्वयंसेवी पनि बनाउँछन् भन्ने सुनिन्छ, खासमा नर्सको पारिश्रमिक औसतमा कस्तो छ ?
नर्सहरूको पठनपाठन पनि विभिन्न तहको छ । नर्सहरूले अनमी/नर्स, स्टाफ नर्स, बिएन, बिएस्सी र मास्टर्स अफ नर्सिङ (एमएन) पढेका हुन्छन् । अनमी पास गरेकालाई २५ हजार र स्टाफ नर्सको तलब २८ हजार भनिएको छ । तर, बेरोजगारीका कारण स्टाफ नर्स, बिएन, बिएस्सी गरेका नर्सहरू पनि अनमीकै जागिर खान गएका छन् । उनीहरूले पाउने तलब पनि अनमीबराबरकै हो । तर, यो तलब सरकारी अस्पतालमा मात्र लागू हुने हो । निजी अस्पतालमा त १० हजारको हाराहारीमा तलब छ । जसरी पनि जागिर खानुपर्ने भएकाले थोरै पारिश्रमिक पनि स्विकार्न नर्सहरू बाध्य छन् । बाध्यताले नर्सहरू अन्यायमा परेका छन् । अझ नर्सहरूलाई महिनौँसम्म ‘भोलेन्टियर’ राख्ने अवस्था थियो । त्यसको विरुद्धमा आवाज निरन्तर उठेपछि त्यो स्थगित भएको छ । तर, अहिले ‘अब्जर्भेसन’मा भनेर राखिएको छ, यस्तोमा मासिक ६ हजार मात्र पारिश्रमिक दिने गरिएको छ । यसरी नर्समाथि शोषण भइरहेको छ ।
नर्सिङ भनेको आमपेसा होइन, यो मानवीय सेवा पनि हो । यस्तो मानवीय पेसामा लागेको जनशक्तिको श्रम शोषण भइरहेको छ भनेर नर्स आन्दोलनमा पनि छन् ।
‘नर्सिङ’ पेसामा देखिएको सबैभन्दा ठूलो समस्या श्रम शोषण हो । काम लगाउने, तर तलब ज्यादै थोरै दिने गरिएको छ । जोखिम भत्ता, रात्रिकालीन काम गरेबापत भत्ता नदिएर अन्याय गरिएको छ । त्यस्तै सुत्केरी हुँदा सरकारले ९८ दिन बिदा तोकेको छ । तर, अस्पतालहरूले महिना दिनभित्रै काममा बोलाउँछन्, कतिपयले त दुई सातामै पनि सुत्केरी नर्सलाई काममा लगाएका छन् । नर्सहरूमाथि श्रम शोषण यस्तो छ कि नर्सहरूले मात्र आवाज उठाएर पर्याप्त हुँदैन । यो शोषण अन्त्य गर्न सरकार आफैँ अग्रसर हुन जरुरी छ । यसका लागि नेपाल नर्सिङ संघका तर्फबाट दबाब दिइएको छ । तर, सुनुवाइ भएको छैन । त्यसैले नर्सहरू आन्दोलनरत भएका छन् ।